Call Secret Sex for Womens in Kathmandu
Unsatisfied womens who are not satisfied with sex life.
Anyone around kathmandu who wants call boys for secret sex can mail to :
There will be total privacy and secret. Feel free to contact and mail..
Charge: First contact then can decide it later.
Posted by Nepali Sex Stories at 10:02 PM 52 comments:
Labels: boys, call, charge, kathmandu, nepali sex, nepali sex stories, privacy, secret, sex, womens
पत्रकारको बुढि चिक्दा--- Nepali Sex Story
मेरो घर मा आजकल यौटा पत्रकार
अनि उस्कि यकदमै सुन्दर पत्नि भाडामा बस्न
थालेका थिय। म पनि पत्रकार सङग कुरा गर्ने
बाहानामा उनिहरुको कोठामा प्राय पुगिरहन्थे।
पत्रकार प्राय समाचार लेखन , आफ्नो ब्लग लेख्न
अनि फेसबुक लाईक पेजको प्रचार प्रसारमा नै
लागि रहन्थ्यो। पत्रकारको जिनदगि भनेको
तेहि कुराहरुमा नै घुल्मिल भाको थ्यो। कोठाबाट
प्राय समाचार सङ्कलन गर्न बाहिर
पनि गैराखदथ्यो । म जिस्काउथे पत्रकारलाई होइन
बन्धु अरुलाई भने यो हेर् त्यो हेर् भनेर फेसबुक पेजमा
बिभिन्न नग्न केटिहरुको फोटो हाल्ने
अनि खालि धेरै लाईक बटुलेर पैस कमाउने मात्र
हो कि यति रामरि बुडि सङ
रमाईलो पनि गर्नि? पत्रकार मेरो कुरालाई
त्यति ध्यान दिदैन थ्यो अनि उस्कि बुडि भने
हासि रहन्थि र भन्थि पत्रकार लाई
आफ्नो घरको दुख पिडा काहा थाहा हुन्छ र?
खालि अर्काको चियो चर्चो गर्दैमा फुर्शद्
हुदैन।।।। यो कुरा सुन्दा पत्रकारको बुडिलाई
पनि पत्रकारले अन्तुस्टि दिन सकेको रहेनछ
जस्तो लाग्यो मलाई। अनि मैले बिस्तारै
पत्रकारको बुडिसङग जिस्किने अनि आउनेजाने
गर्न थाले। पत्रकारलाई केहि गुनासो गरि भने उस्ले
सुन्दैन त्थ्यो तेसैले म छु नि किन आतिन्छेउ भनेर
उस्लाई भनि दिन्थे। उ भन्थि सबै कुरा तपाई बाट
कहा हुन्छ र? पतिको पनि कुनै जिमेबारि हुन्छ
नि। पत्रकार खालि हासेर
टारिदिन्थ्यो अनि आफ्नो काम
मा निक्लिन्थ्यो, प्राय कामहरु म नै गरिदिन्थे
पत्रकारको बुडिको तैपनि उ यो भयेन त्यो भयेन
भनेर गुनसो गरिरहन्थि । धेरै दिन्हरु
बितेपछि पत्रकारको बुडि सङग म हातै हालेर
जिस्कन थलिसकेको थिये। फेरि पत्रकार्कै
गुनसो गर्थि यो गरेनन त्यो गरेनन् ,
मेरो भवना बुझेनन आदि आदि। मैले यक दिन मुखै
चोलेर भने ल मलाई बोलाउन त यकदिन
तिम्रो मनको भवना बुझ्नलाई हेरु कस्तो रहेछ? उ
पनि आजकल डर नै नमनि भन्थि ल आउनुस न त।
मै ले पनि अब ढिला गर्न हुदैन भनेर यकदिन
पत्रकार नभको मौका पारि उस्को कोठामा गये। मैले
आज केहि गर्नै पर्ने
निढो गरि उनको कोटठा तिर लागे.
कोठामा बिभिन्न कुराहरु गर्दै जिस्किने कर्म
मा आज म निकै उत्तेजित भको थिये र
सोफामा बस्दै पत्रकारको बुडिलाई हेर्दै थिये
यस्तै क्रममा मेरो नजर एक्कासी उनको खुट्टातिर
गयो । मैले उनको खुट्टातिर हेर्दै जिब्रो
भित्रबाहिर गर्दै मुख चुक्चुकैरहेकोचुक्चुकईरहेको
थिएँ । उनले देखिहलिन्, म डराएँ, कि उनले केहि
भन्ने हो कि भनेर तर त्यसो भएन उनि त झन्
लजाउन पो थालिन् । त्यसैले मैले झन् घोरेर हेर्न थालें
। उनले त बिस्तारै अफ्नो टांग फट्टाईन्, म झसङ्ग
भएँ किनकि मैले उनले लगाएको सेतो पेन्टी छर्लंगै
देखें । उनको त्यो सेतो पेन्टी अति नै सुन्दर थियो
। उनको त्यो पोटिलो पुतिको आकार बाहिर
पेन्टी बाटनै छर्लंग देखियको थियो । उनको
पुतिको केस्रा छुट्टियको थियो । यो दृश्य देखेर
मैले आफुले आफैंलाई बसमा लिन नै सकिन जसको
फलस्वरुप मेरो हात मेरो लडोतिर गएको थियो ।
मेरो लडो यती ठन्केको थियो कि मेरो पाईन्ट नै
छेडेर बाहिर आउला जसरि । मैले बिस्तारै मेरा
हातले मेरो लाडो पाईन्ट बाहिर बाट नै सुम्सुम्याउन
थालें । त्यसपछि त झन् उनले निहुरेजस्तो गरेर
बिस्तारै अफ्नो स्कर्ट माथि सरिन् । अबत झन् पुरै
देखियको थियो । बाहिरबाट नै मेरो लाडो
छामिरहेका मेरा हात अनयासै पाईन्ट पाईन्ट भित्र नै
पसेर लडोलाई हल्लाउन थाले ।
उनि आफु बसेको ठाउंबाट सरेर
अलि उता गईन् र आँखाको ईसाराले बोलाईन्। म पनि
के कम, उनि भएकै सोफामा गएँ । उनि बिस्तारै म
भएतिर आईन् र म पनि । हामी दुवै जना टाँसिन
पुग्यौं । मैले मेरो हात सोफामा अडाएँ र बिस्तारै
खुट्टाको औंलाले उनको खुट्टामा छुन थालें । उनि
लजाऊँदै थिन् । बिस्तारै मैले मेरो देब्रे हात उनको
घांटीमा लेराएँ तर उनले केहि प्रतिक्रिया नै
नजनाएपछि मैले मेरो हात बिस्तारै उनको काँधमा
राखें । झन् उनि त लजाऊँदै खुट्टाका औंलाहरु चलाउन
थालिन् । मेरो पालो बिस्तारै मेरो हात उनको त्यो
पुक्क परेका रसिला सुन्तलाका दाना जस्ता देख्दैमा
एकैपटकमा कप्प खाऊ जस्ता ठुला-ठुला र पिउरी
जस्ता गीला-गीला दुधका पोका सम्म लिएर आएँ ।
अनि एउटा औंलाले बिस्तारै उनको
गिलो र कसिलो दुधको पोको छुन थालें, उनि त
झन् पग्रेजस्तो लग्यो मलाई त्यसैले मैले मेरो देब्रे
हातको पुरै औंलाहरुले उनको दुध सुम्सुम्याउन थालें ।
...ओ...ऑ...आई..ऊ...मम...उम्म...जस्ता आवाज निकाल्न
थालिन्। अनि मेरो पालो मेरो दाहिने हात
बिस्तारै उनको घोडामा राखें । देब्रे हातले एउटा दुध
मोल्दै दाहिने हातले उनको साप्रा सुम्सुम्याउँदै उनको
अनारी सम्म पुगें । उनि त झन् ठुलो स्वरमा
...ई...ऊ...ए...ओ...ऑ...जस्ता आवाज निकाल्न थालिन्
एउटा हातले दुध मोल्दै अर्को हातले
अनारी सुम्सुम्याउँदै बिस्तारै मैले उनको गतिमा
किस गर्दै बिस्तारै कानमा अनि गालामा अनि
फेरी बिस्तारै उनको मुखमा पुगें र मेरो मुखले उनको
मुख टम्म थुनिदिएँ । त्यसपछि मैले मेरो दाहिने
हात उनको पेन्टी भित्र छिराएँ । उनले धेरै पनि
निकालिसकेकी रहेछिन्, जसलेगर्दा उनको पेन्टी
पुरै भिजेको थियो । उनको त्यो भर्खर उम्रन
खोजेका सेता खैरा रौँ, आहाहा...कति प्यारो र सुन्दर
अनि मैले मेरो हात निकालेर पेन्टीबाहिर बाटनै
सुम्सुम्याउन थालें । बिस्तारै फेरी भित्र छिराएँ र
उनको पुतिमा औंलाले पुतिको ओरिपरी रगट्दै
एउटा हातले दुध मोल्दै मुखमा किस गर्दै अर्को हातले
उनको पुती चलाउन थालें । मैले अब दाहिने हातको
चोर्नी औंला उनको पुती भित्र र बाहिर गर्न
थालेको त उनि ऐया...उउउ...दुख्यो
...छिटो...पोल्यो... भन्दै कराउँदै चित्कार अफ्नो
मुखबाट निकाल्दै थिन् । उनलाई सायद धेरै मजा
आइरहेको थियो त्यसैले मैले पनि ढिला नगरी
बिस्तारै दाहिने हात उनको पुतिबाट झिकेर
उनको स्कर्ट र टिसर्ट खोलिदिएँ अनि उनलाई
किस गर्दै छिटोछिटो आफ्ना सबै कपडा खोलि
नांगै भएँ र उनको पेन्टी पनि खोलिदिएँ ।
अब हामी दुवै जना जन्मजात नग्न भएका
थियौं । दुवै हातले उनको दुध मोल्दै बिस्तारै
मुखबाट किस गर्दै उनको त्यो कुवा सम्म पुगें र
मजाले उनको त्यो कुवाको नुनिलो पनि खाना थालें
...ई...ऊ...ए...ओ...ऑ...जस्ता आवाज निकाल्दै थिन् ।
उनको मुखबाट अनयासै छिटो...plz…छिटो
...अब...त...मारिदेउ मलाई...मेरो राजा...मेरो राजा
...छिटो छिराउन...मा सहन सक्दिन...छिटो लडो
कोचन...मेरो पुती च्यातिदेउन ऐया...उउउ...दुख्यो
...छिटो...पोल्यो... जस्ता सब्द निस्कदै थिए ।
मैले पनि मेरो लडो उनको पुतिको किनारमा दलें र
बिस्तारै उनको पुतिको प्वालमा हालें तर तेत्रो
पनि फ्याक्दा पनि मेरो लडो उनको त्यो कसिलो
पुतिमा छिरें । त्यसैले मैले मज्जाले बल गरेर धक्क
दिएको त स्वात्तै छिर्यो ।
मैले मेरो लडो एकछिन
नाचलाईकन उनको पुती भित्रै रखिरहें उनि रुन
छाडे पछि बिस्तारै पुतिभित्र लडो चलाउन थालें
। अनि बिस्तारै लादोलाई भित्र बाहिर गरौँ थालें
। अब त उनलाई पनि दुख्न चदेचा क्यारे उनले पनि
तलबाट बल लगाएर मलाई साथ दिन थालिन् ।
त्यसपछि मैले पनि फटाफट् लडो भित्र बाहिर
गर्न थालें । उनि आहा...ओहो...हेहे...उहु..कति मजा
आयो...अलि भित्र...छिटो छिटो...deep…
deep…fuck me baby…kill me baby…hurt
me…मेरो राजा...मलाई नछोड...अझ
भित्र...म्म्म्म...ऊऊऊऊम्म्म्म...भन्दै एक्लै भट्भटाउँदै
थिन् । यसरी करिब ३० मिनेट जति
मच्चियपछि म सिथिल भएँ अनि उनि पनि
Posted by Nepali Sex Stories at 12:57 AM 10 comments:
Labels: Nepali Sex Story, पत्रकारको बुढि चिक्दा
लाडो र पुती -- New Nepali Sex Story
मैले ढोका लगाए।उ डराएकि जस्ति थि मैले उस्लै हौस्याए र गालामा चुमे।मैले बिस्तारैअफ्नो हात उस्को कांधमा राखे। उ तल हेरिरहेकि थि। मैले उस्को चिउडोमा समातेर उठाए र ओठ चुम्न लागे।बिस्तारै मैले आफुलाइ सजिलो बनाउदै मेरो पुरै मुख उस्को मुखमा र मेरो दुबै हाथ उस्को पछाडि लगे।उस्लाइ मुसर्दै किस खदै गर्दै थिए। मैले आफ्नो जिब्रो उस्को मुख भित्र हाले। उस्लाइ थाहा नै भएन मैले के गर्न खोज्दै छु।मैले उस्को अनभिग्यता बाट थाहा पाइहले उस्लाइ टंग किस कसरि गर्ने थाहा छैन। पछि कुरा गर्दा उस्ले भन्थि मैले मुभिमा हेरेको चं थिए तर ऐले सम्म नगरेको कुर कसरि थाहा हुनु ,मैले उस्लाइउत्त्जित बनाउन भरसक कोसिस गरें।मैले आफ्नोजिब्रो उस्को मुख भित्र हाले। उस्लाइ थाहा नै भएन मैले के गर्न खोज्दै छु।मैले उस्लै फर्काए उस्को पिठुयौलाइ मेरो छातिमा टासे।उस्को शरिर म संग जोडिएको थियो,मैले उस्को दुबै हात समाते टाइटानिकमा जस्तो। अनि बिस्तारै उस्को टाउको फर्कएर फेरि किस गर्न लागे।मैले बिस्तारै उस्को टाउको लाइ एउटा हातको भरमा छोडे र मेरो दाहिने हातलाइ उस्को बुबु म पुर्याए।उ झसंग भै।मैले किन तर्सेको मेरि रानि भनेर सुरु गरें। ढेरै ठुलो भन्न मिल्दैन त्यो बुबुको पोकोलाइ तर उमेरको हिसाबले सानो पनि हैन। मैले लुगा बाहिरा बाटै उस्को दुध चलाउन लागे। अब उ किसमा बिस्तारै रस लिदै थि।मैले दुध चलाउन लगेपछि उस्का आंखा हरु बन्द भए।बिस्तारै उ अलि सकृय हुन लागि। मैले अब किसको जिमा उसलाइ लगाएर उस्को दुध माड्न लागे। उ बिस्तारै भनेर बेला बेला मा भन्दै थि। मैले उस्को माथिको टप्स खोले ब्रा लाइ ननिकालि उस्को दुधको मुन्टो चुसिदिए। उ अब यौनको त्यो सुखद खेलमा डुबिसकेकि थि। मैले अब उस्को ब्रा खोले।उस्लाइ अर्ढनंग्न बनाए।उ सुख त लिदै थि तर उस्लाइ मेरो लागि के गर्ने थाहा थिएन। मैले मेरो टिसर्ट खोले आफु लाइ पनि अर्धनंग्न बनाए। अनि मैले गरेजस्तै तिमि पनि मेरो छाति चलाउ ,चुस भने।उस्ले तेसैगरि। मैले उ संगको यौन संम्पर्कमा हतार नगर्ने सोचे। मैले एउटा के बुझेको थिए भने। यदि मैले उस्लाइ पहिलो पटक सुख दिन सके भने बांका दिन मेरो लागि सुखद हुनेछ। पछि तेसै भयो।मैले अब उसलाइ बेडमा पल्टाए। फेरि टंग किस गर्दै मैले अफ्नो छाति उस्को छातिमा जोड्दै उस्को बुबु माड्न थाले। बिस्तारै उस्को घांटि छाति हुदै दुध् चुस्न थाले। अब उ अझै प्लिज अझै भन्न थालि।
म जति जति उस्को निपल चुस्थे उ झन् झन् उत्तजित हुंथि। मैले बिस्तारै उस्को पाइण्टखोले उस्ले अब मलाइ आफै सघाउन लागि। उस्को कट्टु पुरै भिजेको थियो। मैले उस्को यौनांगलाइ कट्टु बाहिर बाटै हात ले चलाए। उस्को बिझेको त्यो कट्टुले पनि उस्लाइ झन् बडि उत्तेजित बनाउदै थियो।।मैले बिस्तारै उस्को कट्टु खोले उस्को यौनांग बिझेको थियो। मैले एक हात ले उस्को यौनांग चलाए।अर्को हातले एउटा दुध माडे अनि अर्को दुधलाइ मुख्ले चुस्न थाल्ने। उस्को उत्तेजनको कुनै सिमा थिएन। अब उ आफै मेरो पाइण्ट खोल्न लागि।अब हामि दुबै नांगो थियौ। उस्लाइ के गर्ने थाहा थिएन उस्ले मलाइमैले के गर्ने भनि मैले मैले ज् गर्छु तेइ गर्नु भने। मैले उस्को पुति भित्र औला हाले र पुतिको माथि पट्टि औला बिस्तारौ चलाउन थाले। मैले औला पसौने बितिकै उस्ले दुख्न थल्यो भनि तर चलाउन दि रहि। मैले उस्को पुति को बहिर निस्के को चालामा आफ्नो जिब्रो लगे र बिस्तारै जिब्रो ले चलाए।मेरो जिब्रो ले पुतिको बाहिरको भाग चट्दै थियो भित्र औलाले चलाउदै थियो। उस्ले मलै पुग्यो आज लाइ भनि मैले ऐले भर्खर सुरु भको छ भने। उस्ले मलै एक्दम गाहारो भैराछ भनि मैले तेसो भए तेस्कोउपचार छ भने। मैले कण्डम झिके लगाए अनि उस्लै सोधे यो देखेको छ उस्ले भनि ड्याडि ममिको रुममा प्यकेट देखेको थिए अनि एउटा चोरेर खोलेर हेरेको थिए। मैले आज कसरि युज गर्ने पनि थाहा हुन्छ। तेतिन्जेल पनि मैले उस्को शरिर बाट यौन चाहना कम हुन नदिन आफ्नो हात हरुलाइ सकृय बनाइरखे।उ अब सहन नसक्ने अवस्था मा थि मैले मेरो लिंग लाइ भित्र छिराउने कोसिस् गरे। लिंग प्वालमा छोइएको मात्रै थियो उ कराइ ऐया।नाइ नाइ दुख्छ मैले भने एक्छिन को दुखाइले संसार भुलाउने सुख हुन्छ। येत्रो संसार किन दुख्ने काम् गर्थ्यो।मैले फेरि अलि बडि छिराए। उ कराउदै थि मैले उस्को दुध चुस्द मड्दै आफ्नो लांडो फेरि पसाए। अब उ चिच्याइ। मैले लांडोलाइ ननिकालि कनै आफुलाइ सजिलो पारे र चिक्न थाले। एक्छिन् सम्म ऐया ऐया भनेकि श्रेया अबअझै अझै भन्न थालि। एक्छिन को चिकाइ पछि उस्को झर्न लाग्यो। उ मलाइ नंग्राले चिथोर्न थालि मैले थह पाए उस्ले अभुतपुर्व आनन्द पाइरहेकि छे। मैले अफ्नो पहिला नझार्न चाहेको थिए। उस्को झर्न लागेपछि मलै उस्ले समाति जोड ले। मैले अब ढिला गर्न नहुने सोचेर संभोग को गतिलाइ बढाए।मेरो लांडो उस्को पुतिमा सहजै छिरेको थिएन उस्लै पिडा भएको थियो तर अहिले उ चरम आनन्द पैरहेकि थि। एक्छिन को कृडा पछि उ पनि झरि म पनि झरे। उ अर्कै तिर पल्तेर सुति। म पनि पल्टे।उ थाकेकि थि नबोलि सुति। ५ मिनेट पछि मेरो छतिमा टौको राखेर भनि"आइ लब यु" मैले पनि "आइ लब यु टु" भने।जब म ट्याइलेट जान उठे कण्दम मा रगत लागेको थियो।मैले बेदमा हेरे होटलको सेतो बेड कभर भरि रगत लागेको थियो। मैले उस्लाइ बेड कभर देखाए।उस्ले अब के गर्ने होटलवललाइ भनि मैले केइ फरक पर्दैन भने। मैले नुहाउन जौ भने उस्ले म त नुहाउदिन घरमा थह भयो भने नुहको ।क् भन्ने कह नुहाको भन्ने भनि। मैले जेउ मात्रै नुहाउने हिद म तिम्रो रगत पुचिदिन्छु भने। मैले उस्लाइ शावरमा लगे। दुबै नांगै थियौ। मैले पुछे जस्तो गरे।उस्ले कस्तो दुखेको छ भनि।मैले फलाम लाइ फलाम ले काट्छ भने। उ नै अब त कैले गर्दिन भन्दैथि। मैले धोयेर सफा पारेअप्छि फेरो अफ्नो मुखले उस्को पुति चातिदिए। उ नाइप्लिज भन्दा भन्दै भिज्न थालिसकेकि थि। मेरो लांडो पनि उत्तौलो हुदै थियो।म उभिए। उस्लाइ क् लाग्यो मेरो लांडो समाति र चलाउन लागि।मैले मेरो लांडो उस्को मुखमा हल्न खोजे उस्ले मुखमा लि र चुस्न थालि।मैले उस्लै बेडमा जाउ भने उ तयार भै।हामि ६९ पोजिसनमा सुत्यौ र मैले उस्को उस्ले मेरो लिंग चुस्न चाट्न लाग्यौ।एक्छिन पचि दुबै ले दुबैको दुध् छति माड्न,चुस्न थाल्यौ।अब उ पहिले भन्दा जाने थि। उ पहिले भन्दा बडि सकृय थि। दुख्च नछिराउने पनि भन्दै थि तर चाहना पनि देखिन्थ्यो। मैले फेरि मेरो लांडो छिरए। एस्पालि अलिक्बडि समयसम्म मैलेचिकिरहे,उस्ले चिकाइ रहि..
Posted by Nepali Sex Stories at 12:55 AM 11 comments:
Labels: Nepali Sex Story, new, दुध, लाडो र पुती
Nepali Sex Stories are found in the web searching in Google and most of the stories are same and no new stories in many of the blogs.
So of anyone of you have some experience and stories mail us at friend_mailme@yahoo.com . We will post the post one by one.
Moreover if anyone wants the secret sex you can also mail and contact at friend_mailme@yahoo.com. Both man and women, girls can contact. There will be the privacy of everything. No charges ....
If you are in Kathmandu its easier....
Posted by Nepali Sex Stories at 11:15 AM 8 comments:
Labels: contact, girls, kathmandu, Nepal, nepali, nepali sex, nepali sex stories, new, secret, sex, womens
Posted by Nepali Sex Stories at 11:37 PM 15 comments:
This isanew blog giving the nepali sex stories.
Anyone who wants to publish the stories can send an email to this address: friend_mailme@yahoo.com
New stories will come soon..
Posted by Nepali Sex Stories at 9:36 PM 8 comments:
Labels: Nepal, nepali, nepali sex, nepali sex stories, story